Zinobungozi izitsha zepulastiki
IZITSHA zepulastiki zimibala emihle ekhangayo ethandwa kakhulu yizingane kodwa ongoti bathi kumele abazali baqaphele ukuthi awekho yini amakhemikhali ayingozi asetshenziswe ngesikhathi zakhiwa angaba yingozi uma izinsalela zawo zigcina zingene ekudleni ngesikhathi kufudunyezwa ukudla noma kudlelwa kuzo ukudla okushisayo ISITHOMBE: SIGCINIWE
Phili Mjoli | October 7, 2021
EMAKHAYA amaningi izingane nabanye abantu abadala badlela ezitsheni zepulastiki ngoba bethi azisheshi ukufa kodwa ongoti bezempilo bayaxwayisa ngalokhu. Bathi uma ungumuntu ohlale ezibheke ukuthi udlani ngoba efuna ukuphila kahle, kumele ukubheke ukuthi udlela esitsheni esakhiwe ngani nokuthi kufakwani uma sakhiwa.
Bathi ushevu ongawuthola ngokudla ngesitsha sepulastiki, okusetshenziswe kuso amanye amakhemikhali, ufana nokuthi unesifo sikashukela.
UMnuz Priyanka Kheruka, oyiBrand Head, eBorosil, uthe isitsha sepulastiki uma usifudumeza sikhipha ikhemikhali, i-phthalates, eyaziwa nge-plasticers engu-95% , leyo khemikhali igcina ingene ekudleni uma ubufudumeza ukudla ngaleso sitsha.
"Ukudla okunamafutha okufana nenyama noshizi kunamathuba amaningi, uma kufudunyezwe ngesitsha sepulastiki, okuthi i-phthalates ingene ngqo kukona masinyane. Uma udla lokho kudla, ubeka engcupheni amaphaphu, izinso nesibindi. Ngakolunye uhlangothi, i-bisphenol eyaziwa ngokuthi iBPA ephuma kuzo izitsha zepulastiki yenyusa amathuba okuthi uhlaselwe yisifo senhliziyo nesikashukela," kusho yena.
Uthe ingilazi yona ayifani nepulastiki, ayiwukhiphi ushevu uma ufudumeze ngayo futhi aliyilimazi imvelo uma isilahliwe ngoba ayikho ikhemikhali eyikhiphayo ehlukumeza imvelo.
“Ukusebenzisa isitsha esiyingilazi esivalwayo kuyasiza ekutheni singabikhona isidingo sokuthi usebenzise ipulastiki yokugoqa ukudla, i-cling wrap. Ukusebenzisa izitsha ezakhiwe ngokusansimbi nakho kungasiza ekutheni ungabi nezinkinga zempilo," kusho yena.
“Amabhodwe akhiwe ngokusansimbi (steel) awayikhiphi ikhemikhali eyingozi uma uphekile kanti ukudla okugcinwe ebhodweni akushintshi indlela okunambitheka ngayo futhi kulula ukuwahlanza. Amabhodlela okugcina ukudla ezitolo maningi, kumele ukhethe lawa avaleka athi ngci futhi izivalo zawo ezingathombi (rust) ukuze ukudla kuhlale kusezingeni elifanele," kusho yena.
Uthe izitsha ezakhiwe ngethusi (bronze) zikulungele ukuthi kufudunyezwe ngazo ngoba ziyakugcina ukushisa.
"Ziningi izinto ongakhetha kuzo ezakhiwe ngethusi. Izintambo zethusi zinhle kakhulu ekufudumaliseni amanzi nokugcina ukushisa," kusho yena.
I-BPA sekunesikhathi kukhalwa ngokuthi iyingozi, amabhodlela okuncelisa ingane sekuze kwakhiwa okuthiwa aphephile, ayisetshenziswa le khemikhali uma akhiwa abizwa ngeBPA free.
Ucwaningo luveza ukuthi izinsalela zeBPA, uma zidliwa umuntu, zengeza amathuba okuthi abe nezinkinga zesibeletho, zokungabatholi abantwana, umdlavuza webele. Ezinganeni idala inkinga yokungakwazi ukufunda kahle.
I-phthalatesnoma ne-plasticers yingxube yamakhemikhali asetshenziselwa ukuncibilikisa imikhiqizo ethile kuyo, okuyiplastiki, uwoyela wokuthambisa izinsimbi, umata i-vinyl, izinsipho zokugeza, ezokugeza izinwele (shampoo) nezigcobo zokuzokunakekela izinwele.